November 27, 2019 - Myitter
November 27, 2019 Myitter 0
ပန်ကာ အသေထားပြီး အိပ်ရာကနေ ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်သေဆုံးသွားသောလူငယ် ငယ်တယ် ကြီးတယ် ရယ်လို့ မဟုတ်ပါဘူး ….ပန်ကာ ကို သတိထားကြပါ …… ပန်ကာ ကို ခေါင်းဘက်ကနေ အသေထားပြီး အိပ်ရာကနေ ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်ပြီး ပြန်မနိုးလာတော့ပါဘူး ….. ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ ပန်ကာကို ညဖက် အကြာကြီး ဖွင့်မအိပ်ကျပါနဲ့ […]
ဆင်းရဲသား လူနာတွေ အတွက် အခမဲ့ ကုသပေးတဲ့အပြင် နေ့လည်စာပါ စီစဉ်ပေးတဲ့” ညောင်လေးပင်က နှလုံးလှ ဆရာဝန်ကြီး” ….
ညော င်လေးပင်က အဲဒီဆရာဝန်အကြောင်း ပြောချင်လာတာ လျှာယားနေပြီဗျာ.. ဘယ်နှယ့် ဆရာဝန်သာဆိုတယ် လူပုံပန်းက မိုက်ကျစ်ကျစ်ရယ်..စကားပြောကလည်း ဒုံးတိတိနဲ့ ဆိုတော့ သူ့ကိုမသိတဲ့လူတွေကို ဘုရားစူးမိုးကြိုးပစ် ကျိန်ပြောရင်တောင် ဆရာဝန်လို့ မယုံဘူး စိတ်ချ။ တစ်နေ့ပေါ့.. ဂေဟာမှာ ခိုလှုံနေတဲ့ ဖဒိုသူ ကိုယ်ဝန်သည်တစ်ယောက်က ဖဒိုဆေးရုံမှာ သူ့ကိုသိတဲ့သူနဲ့ ဆုံမှာစိုးလို့ […]
ခြေဖြတ်ရမည့် ဆီးချိုဖြစ်သော လူနာတောင်ကောင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့ မီးကွင်းဂမုန်း အရှည်မျိုး ….
မွန်ပြည်နယ်မှာ” နဂါးရုံဘုရားတည်ပြီး သိန်း (၅၅၀) ဖိုး မွေးနေ့အလှူလုပ်ခဲ့တဲ့ နေခြည်ဦး ”…